09 oktobra 2019 – Fankalazana manotrokotroka ny Andro maneran-tany ho an’ny Paositra
Ho fankalazana ny Andro maneran-tany ho an’ny Paositra – 09 oktobra, dia nanomana hetsika maro ny Paositra Malagasy.
Nanomboka androany 08 oktobra ny fampiratiana hajia (exposition philatélique) sy Varavarana misokatra ho an’ny daholobe eo amin’ny Zaridainan’Antaninarenina, andraisan’ireo mpitahiry sy mpankafy hajia anjara.
Nisy ihany koa ny fanomezan-drà teny antoerana ary tonga nanohana ny antso Atoa Christian RAMAROLAHY, Minisitry ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampiroboroboana ny Haitao Ara-kajy Mirindra.
Fotoana lehibe tokoa ny fankalazana ny 09 oktobra tamin’ity taona 2019 ity ho an’ny Paositra Malagasy. Hankalazaina amin’ity ihany koa mantsy ny faha 145 taonan’ny UPU(Union Postale Universelle), ny 25 taona nisian’ny Paositra Malagay ary ny famaranana ny fankalazana ny 15 taona nivoahan’ny tolotra Tsinjo lavitra.
Rahampitso dia hisy fitokanana amin’ny fomba ofisialy ny biraon’ny Paositra etsy Vassacoss izay navaozina.
Manentana antsika ho tonga hitsidika izany fampirantiana izany.